Aim-panahy | MNVJ
“Ny fahazavana marina” nentin’i Jesosy
Afaka nisambotra an’i Samsona ny Filistina, ka namotsitra ny masony, satria ny heriny dia niala tao aminy: “Jehovah efa niala taminy” (and. 20). Nahoana no nisy izany? Satria veriny ny toetra iray maha-Nazirita azy! Ilay tokony ho “Nazirita ho an’Andriamanitra… hatrany an-kibon-dreniny” (13. 7) dia namboraka ny tsiambaratelon’ny heriny, ary nandalo tamin’ny lohany ny hareza. Ny anton-javatra mitovy dia miteraka vokany mitovy hatrany: raha tsy olona “natokana” intsony isika, raha toa ka tsy mampiseho ny toetra maha-Nazirita isika, dia tsy hanan-kery ara-panahy, tsy hanana fahatakarana ara-panahy.
Ny lazain’ny Tenin’Andriamanitra momba ny fiafaràn’ny tantaran’ny Fiangonana tompon’andraikitra dia misy fampianarana mahakasika indrindra ny kristiana amin’izao fotoana izao, satria dia efa eo amin’ny fiafaràn’io tantara io izy.
Ny toetra iray misongadina eo amin’i Laodikia dia ny fahajambana! Ny mbola ratsy kokoa noho izany aza, dia tsy azony an-tsaina akory izany: “Tsy fantatrao fa ianao no… jamba…” (and. 17). Ny fiangonana tao Laodikia dia nirehareha tamin’ny zavatra rehetra izay noheveriny fa nananany, ary nihevitra fa tsy mila na inona na inona. Tena tsy dia nahalala firy ny tena toetrany izy! Tsy azony an-tsaina ny fahoriany, ny fahantrany, ny fahajambany. Tsy fantany ny zavatra araka ny fihevitr’Andriamanitra. “Ny zava-drehetra tao, araka ny voalaza, dia maizina raha ny amin’ny fahamarinana, ary tsy azo antoka raha amin’ny fitsarana ny ratsy.”
Fa eo ny fanafody ho an’i Laodikia, ary koa ho antsika rehetra ankehitriny: “Manoro hevitra anao Aho hividy amiko… ody maso, hahosotrao ny masonao, mba hahiratanao.” Tsy maintsy mankany Aminy hoe? Raha “mividy” dia tsy maintsy mandoa, ary ny vidiny dia ny fahafoizana izay rehetra mahafinaritra ny fo ara-boajanahary, izao tontolo izao sy ny filàny, izay rehetra avy amin’ny nofo, na ny nofo amin’ny toetrany ara-pivavahana aza, satria nofo hatrany izany. Tao Laodikia dia nitady ny fahafaham-pon’ny fo ny olona, nanaiky hotarihin’ny fihetseham-po manokana, tsy nieritreritra afa-tsy ny tena, raha halalinina. Tsy maintsy petahina vy mahamay izany rehetra izany, tsy maintsy iainana ny Romana 6. 11; Galatiana 2. 19-20; 5. 24-25; 6. 14 —na dia maharary ho an’ny nofo aza izany. Ary dia hitodika any amin’i Jesosy ny fo! Tsy misy fahajambana intsony rehefa mifantoka amin’io zavatra iray io ihany ny maso! —“Ny maso no jiron’ny tena; koa amin’izany, raha tsara ny masonao, dia hazava avokoa ny tenanao rehetra” (Matio 6. 22). Amin’izany dia tsy hisy intsony zavatra hanakana ny asan’ny Fanahy Masina, Izay afaka miasa tsy amin’alahelo, ary tonga mameno ny fo amin’i Kristy. Rehefa nahiratry ny ody maso avy amin’Andriamanitra ny maso, dia ho hita indray ny fahatakarana ara-panahy, izay vokatry ny ny fananantsika “hosotra avy amin’Ilay Masina”.
Ny fitaovana rehetra ilaina dia eo am-pelatanantsika: “Efa nomen’ny herin’Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an’Andriamanitra” (2 Petera 1. 3). Tsy manana fialàn-tsiny isika, ary meloka tokoa raha toa tsy mampiasa izany. Mpiray fomba amin’Andriamanitra isika, dia ny toetran’Andriamanitra ara-moraly, koa lasa afaka, noho ny fiasan’ny Fanahy Masina ao anatintsika, hamokatra voa avy amin’io toe-tena io, hampifandray tendro ny tsirairay amin’ireo toetrany: hatsaram-panahy, fahalalana, fahononan-tena, faharetana, fitiavam-bavaka, firahalahiana, fitiavana. Raha ao amintsika ireo zavatra ireo, ary be dia be, dia hampiseho asa masina isika, ary hamokatra amin’ny tena atao hoe fiainana kristiana marina: ny fahalalana ny Tompo sy Mpamonjy antsika, Jesosy Kristy. Amin’izay fotoana izay dia “mba tsy ho zaza intsony isika, ka ahilangilana sy ampitambolimbolenin’ny rivotry ny fampianarana samihafa…”, fa “mba hanaraka ny marina amin’ny fitiavana ka hitombo amin’ny zavatra rehetra ho amin’Izay Loha…” (Efesiana 4. 13-16). “Mba ho fantatro Izy…” (Filipiana 3. 10), izany no tanjon’ny kristiana. Izany fahalalana izany no ambaratonga avo indrindra amin’ny fivelarana ara-panahy: ireo “ray” dia mahafantatra Ilay hatramin’ny voalohany (1 Jaona 2). Tena mifanohitra amin’ny toe-jaza, izay, amin’ny ankapobeny, miaraka amin’ny tsy fahampian’ny fahatakarana ara-panahy izany! Manampy ny apostoly Petera hoe: “Fa izay tsy manana izany zavatra izany kosa dia toa jamba…” (2 Petera 1. 9).
Ry mpamaky mbola tsy niova fo, izay mbola mitoetra ao amin’ny haizina, manatòna an’i Jesosy, Izay “fahazavan’izao tontolo izao”, mba hanananao “ny fahazavan’aina” (Jaona 8. 12). Aza miandry ho tara loatra, satria “indro, ankehitriny no andro famonjena” (2 Korintiana 6. 2); “avy ny alina” ho an’ny tsy mpino! hoy ny Tompo.
Ary isika izay “zanaky ny mazava”, noho ny fahasoavan’Andriamanitra,dia maniry marina handeha eo amin’ny fahazavana. Aoka isika hiaina isanandro amin’ny fahatahorana an’Andriamanitra sy amin’ny fisarahana amin’ny ratsy. Aoka hahay hiaiky eo anatrehany ny tsy fahampian’ny fahatakarantsika isika; aoka hohenointsika ny torohevitr’Ilay manasa antsika hividy Aminy ny ody maso hanosorana ny masontsika, mba hahiratantsika!